Being honest may not get you a lot of friends but it’ll always get you the right ones. John Lennon – Kichuu
HomeNewsAfricaBeing honest may not get you a lot of friends but it’ll always get you the right ones. John Lennon
Mucaa Dargaggeessii kun hattuu fi Saamtuu Aangoo irra jirtu waa barsiisee jira yoo barataniif. Btw hannii amala malee hiyyummaa miti.
Dargaggeessi armaan gaditti suuraa isaa argitan kun jiraataa Naannoo Sumaalee, Magaalaa Jijjigaati.
Hojiin isaa guyyuu konkolaachisaa baajaajii yemmuu ta’u, guyyaa kaleessaa dubartii dhukkubsattu tokko “kontiraataan” gara mana yaalaa geesse.
Hospitaalan erga ishee ga’ee booda yemmuu deebi’utti baajaajii isaa keessatti “peestaalii” gurraacha hidhamee jiru arga. Fuudhee saaqee yemmuu ilaalu qarshii hedduu keessatti arga. Qarshii 300,000 (kuma dhibba sadi) dha. Innis kan dubartii mana yaalaa geesse sanaa akka ta’e shakkuun ariitiidhaan gara hospitaalichaatti deebi’uun ishee bira yemmuu ga’u ishee boo’aa jiru arga.
Innis ishee yemmuu gaafatu qarshii hedduun (300,000) akka jalaa bade itti himti. Innis baajaajii kiyya keessatti irraanfatte kunooti jedhee kenneef.
Yeroo ammaa kanatti namootni hedduun wayita dafqaa fi qabeenya namaa saamaa fi hataa jiranitti, addunyaa kana irraa namni akka abdii hin kutanne si taasisu nama qajeeltoo fi abbaa haqaa akka dargaggeessa kanaati.
Milkaa’i, Waaqayyo si yaa eebbisu
Hiyyummaan hannaaf sabaaba miti
Namuusummaan guddisaa ganamati
Darggaagoon Pirdanti Musxafe cinaatti argamu kun jirata Naannoo Somaleti. Qr 300,000 lafa argate qarshiicha abba qarshiif deebise. Prizdantin garuu darggaagoo fakkeenyumaa namuusa olaana garsiise kanaf konkoolata fi Mana jireenya badhaase. Mee warri wan xixxiqoo hattaanii maqa kessan Gaarii balleesitan kan sila namuusa xiqqaan badhaasa guddaa argatan dhaba jirtan asiirra yoo baraanne hoo waluumanu. Alnaamusummaan umaama miti amaala abbati.